खानाको स्वाद बढाउने गर्छ । लसुन बिनाको खानाको स्वाद फिक्का लाग्ने धेरैले बताउँछन् । तर लसुनले खानाको स्वाद बढाउनुका साथै हाम्रो स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक हुन्छ । खाली पेट लसुनको सेवन गर्नु निकै फाइदाजनक मानिन्छ । आउनुहोस्, यसबारे जानकारी लिऔंः मधुमेह, डिप्रेशन र क्यान्समा खानुहोस् लसनुः लसुनले शरीरलाई परजीवी र किराबाट जोगाउँछ । थुप्रै रोग जस्तै मधुमेह, डिप्रेशन र क्यान्सरको रोकथाममा सहायक हुन्छ । लसुनको सेवन र्दा उच्च रक्तचापको… पुरा पढौ
साउन महिनाभर खीर खानु राम्रो हुने विश्वास पश्चिम नेपालमा रहेको छ। नेपाली सस्कृतिमा ‘असार १५ दही चिउरा खानू, साउनको १५ खीर’ भन्ने भनाई छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषिकहरूले धान रोपेर काम सकेपछि खुसीयालीस्वरूप खीर खाने परम्परा विकास भएको संस्कृतिविद् डा। विष्णु दाहालले भनाई छ । भारतमा पनि साउन महिनामा खीर खाएमा धेरै शुभ हुने मान्यता रहेको छ। साउन महिनाको सुरुवातमा मासुभन्दा… पुरा पढौ
तपाइँलाई गाइने किरा थाहा छ ? जान्नुहोस् यस्ता महत्वपूर्ण जानकारी
सानोमा यसको पछिल्लो भागमा मसिनो धागो बाँधेर छोड्दा आनन्द लाग्थ्यो। यसलाई हेलिकप्टर भन्यो अनि पछि पछि दगुर्‍यो। तर आजभोलि गाइने किराहरु देख्न पनि गाह्रो भैसक्यो। यसलाई नचिन्ने मानिसहरु सायदै होलान्। यिनको लामो शरीर, पारदर्शी पंखेटाहरु तथा ठूलाठूला आँखाहरु हुन्छन्। यिनीहरु किरा हुन्। यसलाई खेतारी,पानी टिपुवा, टुकली, फिरफिरे, झ्यालिन्चा आदि नामले समेत चिनिन्छ। टाउको ठूलो भएको कारणले कसै-कसैल घन टाउके किरा समेत भन्दछन्। यिनीहरु तातो मौसममा तथा पानी आसपासको क्षेत्रमा बस्न… पुरा पढौ
विवाह अघिको यौनसम्बन्ध थाहा हुँदैन ! कसरी ?
महिला तथा पुरुषले विवाह अगाडि यौन सम्पर्क राखे–नराखेको कुरा थाहा पाउन खासै सकिदैन। सामान्य रुपमा तथा अनुमानको आधारमा महिलाले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए नआएको वा दुखेन दुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ। जसमा कुनै बैज्ञानिक आधार पाइदैन। पुरुषको हकमा पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे नफाटेको, पछाडिसम्म खुले नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए–नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पनि पाइन्छ । जसमा पनि खासै कुनै बैज्ञानिक आधार… पुरा पढौ
टिप्पणीको परिचय र ढाँचा
परिचयकार्यालयमा विभिन्न कार्यहरू सम्पादनका सिलसिलामा प्रचलित कानूनका आधारमा आफ्नो राय सहित निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेस गर्नका लागि माथिल्लो तहमा पेस गरिने दस्ताबेज टिप्पणी हो । नेपाली शब्दकोशका अनुसार प्राप्त कुनै निवेदनबारे सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया लेख्ने आफ्नो ठहर सहित माथिल्लो तहमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिने संक्षिप्त लेख टिप्पणी हो । एउटा सङ्गठनभित्र कुनै एक पदाधिकारीबाट आफ्नो सुपरिवेक्षकसमक्ष कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रशासकीय विषयको पत्र माथि… पुरा पढौ
साउनमा मेहन्दीको महत्व, घरमै कसरी तयार गर्ने ?
साउन महिना हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि विशेष मानिन्छ। त्यसमाथि यो महिना रङका हिसाबमा पनि अन्य महिनाभन्दा विशेष छ। कारण हो यस महिनाभर प्रयोगमा आउने पहिरन तथा सामाग्री र यीनमा प्रयोग हुने रातो, हरियो र पहेँलो रङ। महिलाहरु रातो, हरियो र पहेँलो रङका सारी, चुरा, पोतेमा सजिएर आफूलाई नवदुलही जस्तै‍गरी शृंगार गर्दछन्। यसबाहेक प्रत्येक सोमबार शिवको पूजाआराधना गरी व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रतसँग जोडिएको अर्को पाटो हो मेहन्दी लगाउनु। पूजा, आराधना गर्दा हात-खुट्टामा मेहन्दी लगाएर गर्दा शुद्ध मानिनुका साथै… पुरा पढौ
‘खराब बानी, जसले सधैं गरीब बनाउँछ’
धन हाम्रो भौतिक जीवनका लागि अपरिहार्य छ । दैनिक गुजाराका लागि मात्र होइन, जीवनलाई सहज र सरल बनाउनका लागि धन चाहिन्छ। हुन त जीवनमा विद्याको महत्व पनि सामान्य रहँदैन। तर, धन र विद्याको आ–आफ्नै अलगअलग महत्व छ। विद्याले हामीलाई बौद्धिक रुपमा सम्पन्न तुल्याउँछ। त्यसैगरी धनले भौतिक जीवनलाई सम्पन्न तुल्याउँछ। यी दुबै एकअर्काको परिपूरक पनि हुन्। भनिन्छ नै, ज्ञान विनाको धन व्यर्थ छ। विहान बेलुकी छाक जुटाउन, चाडपर्व मनाउन, उपचार गर्न,… पुरा पढौ
नाताका मात्र पिता, काम पतित…
प्रेमीसँग भागेर बिवाह गरेकी गर्भवती छोरीलाई आफ्नै पिताले मारेको खुलासा भएको छ । केही दिनअघि भएको यो हत्याको रहस्य खोज्दै जाँदा ती युवतीले परिवारको अनुमति बिना प्रेमीसँग बिहे गरेकोले उनका पिताले उनको हत्या गरेको पाइएको हो । केही दिनअघि मुम्बइको घाटकोपरमा २० वर्षकी ती गर्भवती युवतीको शव भेटिएको थियो । आइतबार उनको शव सडक पेटिमा भेटिएको थियो । मृतक मिनाक्षी चौरसिया ४ महिनाकी गर्भवती थिइन् । शनिबार उनका पिता राजकुमार… पुरा पढौ
हरिवंश आचार्यको “बूढो हुन मन छैन” रिलिज
हास्यव्यङ्ग्य र अभिनयमा उत्कृष्ठ हरिवंश आचार्यको गीत “बूढो हुन मन छैन” आज रिलिज भएको छ। कलाकार हरिवंशको सो गीत मह सञ्चारद्वारा रिलिज गरिएको हो। हरिवंशका सारङ्गी रेटौँला, घाँस काट्नु खुर्केर, कन्डक्टरले दुई रुपियाँको टिकट काट्दछ, आदि अति लोकप्रिय गीतहरू रहेका छन्। भिडियो https://youtu.be/WPtochkrKPs पुरा पढौ
समर्थक मारा भारतीय क्रिकेट !
जारी विश्वकप क्रिकेटमा न्युजिल्याण्डसँगको हारले भारतका समर्थकहरूलाई ठूलो आहत दियो। यसमा कतिले दुःख ब्यक्त गरे त कतिले टोलीका खेलाडीको प्रदर्शनप्रति आक्रोश पोखे। सेमिफाइनल हार्नुअघिसम्म यस्तो लाग्थ्यो इङ्ल्याण्डमा भारतले केहि गर्नेछ किनकी यतिबेलासम्म उसले शानदार खेल प्रदर्शन गरेको थियो। उसको बलिङ, ब्याटिङ दुबै कमालको रहँदै आएको थियो। टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शनले गर्दा भारतीय समर्थकहरूले भारतले विश्वकप उपाधि जितेको कल्पना गर्न थालिसकेका थिए। यस्तोमा भारतले हार बेहोर्यो । त्यसपछि यसको सबैभन्दा ठूलो पीडा… पुरा पढौ